Dhuga Ba’umsi Qorannaa Aangoo Irraa Kaasuu Traamp Irratti Geggeessamu Dhaga’amuu Jalqabe
Sadaasaa 13, 2019
Ka seena qabeessa ta’e dhuga ba’umsi dhimma aangoo irraa kaasuu kan prezidaant Doonaald Tramp irratti fuuleffate ennaa seera tumtoonni ijoo ta’an yaada akkaan wal rukkutuu kan Traamp bu’aa siyaasaaf jecha aangootti akkaan fayyadaman moo miti jedhu har’a Washington keessatti baname.
Miseensa mana maree Adam Schiff tattaaffii prezidaant Traampiin aangoo irraa kaasuuf geggeessamu hoogganu.
Adam Schiff prezidaant Traamp maallaqa gargaarsa waraanaa miliyoona 391 utuu hin kenning dura Yukreen mormituu isaanii itti aanaa prizidaantii duraanii Joe Biden irratti qorannaa akka geggeessitu dhiibbaa godhan jedhan.
Dhimmi isaa kan hagas nama jeequ waan ta’eef kun amala aangoo irraa nama kaasu yoo hin ta’in maal ta’uu danda’a jechuu dhaan dura taa’aan koree basaasa kan mana maree bakka bu’oota uummataa Shiff dubbataniiru.
Kan Traampiif baabsan miseensi mana maree Devin Nunes akka jedhanitti dhuga ba’umsi kun agarsiisa tiyaatraa TV irratti dhiyaate kan adeemsa aangoo irraa kaasuuf yakka nama irra barbaaduu ti jedhan.